Shabaab oo weeraray fariisimo ciidamada Militariga ku leeyihii... | Universal Somali TV
Shabaab oo weeraray fariisimo ciidamada Militariga ku leeyihiin deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose
Ciidamada Al-shabaab ayaa waxey saaka weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Bariire oo ay fariisimo ku lahayeen Ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya.
Dagaalkan saaka ka dhacay deegaanka Bariire waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Shabeelada hoose sida ay sheegeen dadka degaaanka.
Idaacada ku hadasha Afka Al-shabaab ayaa baahisay in dagaalkaasi lagu gubay gaari Taw ah oo ay la haayeen Ciidamo katirsan dowlada Soomaliya gaar ahaan ciidamo ay soo tababartay Dowlada Mareykanka, balse wax faah faahin intaas kasii badan maka bixin dagaalka ciidamadoodu ay qaadeen.
Wali wax war ah kama soo bixin maamulka deegaanka bariire ee Gobalka Shabeelada hoose ee ku adan weerarkaan la sheegay in lagu qaaday deegaankaas.
Maalintii shalay ayeey aheed markii dagaal-yahano katirsan Al-shabaab weeraro ku qaadeen deegaanada Mukayga iyo Bariire oo wada dhaca duleedka degmada Afgooye kuwaasi oo labadii dhinac ee halkaasi ku dagaalamay uu qasaaro kasoo gaaray
Kan-xigaDP World oo maanta la wareegaysa Maam...
Kan-horeKhayre: Calanku qiimo yeelan maayo ha...
39,206,429 unique visits